Politika momba ny tsiambaratelo - NYE Countdown ho an'ny Djs, Vjs, Nightclubs 2021
Sahala amin'ny ankamaroan'ny mpandraharaha tranonkala, NYECountdown, llc, ("NYECOUNTDOWN, LLC"), dia manangona fampahalalana tsy misy olona manokana momba ny karazana fampidiran-tserasera sy mpizara mpizara, toy ny karazana navigateur, ny fiteny fiteny, ny toerana misy azy ary ny daty sy ora voatondro isaky ny fangatahana mpitsidika. NYECOUNTDOWN, tanjon'ny LLC hanangonana fampahafantarana tsy misy olona manokana dia ny hahafantatra bebe kokoa ny fomba fampiasan'ny mpitsara NYECOUNTDOWN, ny tranokala LLC. Indray mandeha, NYECOUNTDOWN, LLC dia mety hamoaka ny fampahafantarana tsy misy olona manokana amin'ny fampivondronana, ohatra, amin'ny famoahana tatitra momba ny fironana amin'ny fampiasana ny tranonkalany. Ny NYECOUNTDOWN, LLC dia manangona fampahalalana manokana hahafantarana ny tena manokana toy ny Internet Protocol (IP) adiresy ho an'ny mpampiasa lozisialy ary ho an'ireo mpampiasa mandefa fanehoan-kevitra ao amin'ny bilaogy WordPress.com. NYECOUNTDOWN, LLC dia manambara ny adiresy IP mpampiasa sy mpaneho anaty kaonty IP ihany noho ny toe-java-misy izay ampiasainy sy hanambarany ny mombamomba ireo fampahafantarana manokana araka ny voalaza etsy ambany, afa-tsy ny adiresy IP sy ny adiresy mailaka dia hita sy ambara amin'ireo mpitantana ny blog izay misy sisa ny fanehoan-kevitra.
Ny mpitsidika sasany mankany amin'ny NYECOUNTDOWN, ny tranonkalan'ny LLC dia misafidy ny hifanerasera amin'ny NYECOUNTDOWN, LLC amin'ny fomba izay mitaky NYECOUNTDOWN, LLC hanangona fampahalalana manokana. Ny habetsahana sy ny fampahalalana izay angonin'ny NYECOUNTDOWN, LLC dia miankina amin'ny toetran'ny fifandraisana. Ny olona tsirairay na ny orin'asa mety afaka miditra amina fifanakalozana miaraka amin'ny NYECOUNTDOWN, LLC dia angatahana hanome fampahalalana fanampiny, ao anatin'izany raha ny fampahalalana momba ny tena manokana sy ara-bola takiana amin'ny fametrahana ireo fifanakalozana ireo. Amin'ny toe-javatra tsirairay, NYECOUNTDOWN, LLC dia manangona ireo fampahalalana ireo raha tsy ilaina na mifanaraka amin'ny fanatanterahana ny tanjon'ny fifandraisan'ny mpitsidika amin'i NYECOUNTDOWN, LLC. NYECOUNTDOWN, LLC dia tsy mampahafantatra ny mombamomba ny tena manokana noho ny voalaza etsy ambany. Ary ny mpitsidika dia afaka mandà foana ny hanome vaovao mombamomba azy, miaraka amin'ny lava-bato mba hisakanana azy ireo tsy hanao hetsika manokana mifandraika amin'ny tranokala. Raha jerena ny tontolon'ny tranokalan'ny Operates, ny fampahalalana manokana dia mety ho hitan'ny olona any ivelan'ny firenena onenanao, anisan'izany ireo olona any amin'ny firenena izay toa tsy ampy amin'ny lalàna momba ny fiainana manokana ao amin'ny firenen'ny fireneko. Raha tsy azonao antoka na mifanipaka amin'ny fitsipika eo an-toerana ity Politika momba ny fiainana manokana ity dia tsy tokony handefa ny fampahalalana anao ianao. Raha mipetraka ao anatin'ny vondrona eoropeana ianao dia tokony ho marihina fa halefa any Etazonia ny fampahalalana anao, izay heverin'ny Vondrona Eropeana fa manana fiarovana fiarovana data. Na izany aza, araky ny lalàna eo an-toerana manatanteraka ny fanarahan-dia an'ny Vondrona Eropeana 95 / 46 / EC an'ny 24 Oktobra 1995 ("Fitsipika momba ny tsiambaratelo ho an'ny EU") momba ny fiarovana ny olona momba ny famoahana ny angon-drakitra manokana sy ny hetsika maimaim-poana ny data toy izany. izay hita any amin'ireo firenena any ivelan'i Etazonia izay manolotra fampahalalana momba ny tena manokana dia manaiky ny fampiasana ankapobeny ny fampahalalana toy izany izay omena ato amin'ity Politikan'ny tsiambaratelo ity ary ny famindrana azy sy / na fitahirizana any Etazonia.
Entanina ny mpanjifa, saingy tsy takiana mba hampiditra fanazavana momba ny tenany, izay azo aseho amin ny kaontiny. Amin'izao fotoana izao dia tsy ho hita ao anatin'ny tambajotranasoratra anarana, ny “Nickname” sy ny tanàna misy anao izahay. Raha tsy tianao haseho ny mombamomba ny toerana misy anao ianao dia aza miditra aminy rehefa mamita ny fampahalalana momba ny famandrihana.
NYECOUNTDOWN, LLC dia nanolo-tena hiaro ny fiainana manokan'ny ankizy, indrindra ireo eo ambany 13. Tahaka ny NYECOUNTDOWN, LLC dia mandrisika ny ray aman-dreny sy ny mpiambina handray anjara mavitrika amin'ny zotram-pandraisan'ny zanany sy ny zanany amin'ny Internet. NYECOUNTDOWN, LLC dia tsy saika hanangona vaovao avy amin'ny zaza tsy ampy taona. Ankoatr'izay, NYECOUNTDOWN, LLC dia tsy mikendry ny tranonkala ho an'ny ankizy.
Rohy mankany amin'ny tranonkala tsy mpiasa
Ny tranokala dia mety misy rohy mankany amin'ny tranokala na toerana hafa izay mety tantanan'ny NYECOUNTDOWN, LLC na ireo mpiara-miasa aminy, ary ny hafa ampiasain'ny antoko fahatelo. Ireo rohy ireo dia natao ho anao fotsiny. Tsy efa nandinika ny momba ny tranokala hafa izahay. Izahay dia tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatin'ny tranonkala hafa na ny vokatra na serivisy mety atolotra amin'ny alàlan'ny tranokala hafa. Noho izany, tokony hampitandrina ianao rehefa mampiasa tranokala hafa, rehefa manao loza mety hitranga ianao. NYECOUNTDOWN, LLC dia mandrisika anao handinika ny politika momba ny tsiambaratelo amin'ny tranonkala rehetra alohan'ny handefasana ny mombamomba anao manokana.
Fampahalalana momba ny trosa
NYECOUNTDOWN, LLC dia mampiasa PayPal, Inc. amin'ny maha-mpamatsy serivisy an'ny antoko fahatelo. NYECOUNTDOWN, LLC dia tsy mitahiry na oviana na oviana, misy fampahalalana momba ny trosa mba hividianana na hihazonana famandrihana isaky ny serivisy. Tahaka izany, ny NYECOUNTDOWN, LLC dia mandà ny andraikitra rehetra amin'ny fampahalalana trosa.
NYECOUNTDOWN, LLC dia mampiasa ny Google Analytics hahazoana vaovao tsy fantatra anarana avy amin'ny mpampiasa azy ary mety manangona statistika momba ny fihetsiky ny mpitsidika amin'ny tranokalany. NYECOUNTDOWN, LLC dia mety hampiseho izany fampahalalana izany ampahibemaso na hanome izany amin'ny hafa. Na izany aza, NYECOUNTDOWN, LLC dia tsy mampahafantatra ny mombamomba ny tena manokana noho ny voalaza etsy ambany.
NYECOUNTDOWN, LLC dia manambara ny fampahalalana manokana sy ny fampahafantarana manokana ho an'ny mpiasa, ny mpiantoka sy ny mpiara-miasa aminy fa:
• mila mahafantatra fa ny fampahalalana mba hamolavolana azy amin'ny NYECOUNTDOWN, an'ny anaran'ny LLC na hanome tolotra azo alaina ao amin'ny tranokalan'ny NYECOUNTDOWN, tranonkala LLC, ary
• izay nanaiky fa tsy hampahafantatra izany amin'ny hafa izany.
Ny sasany amin'ireo mpiasa, mpiantoka ary misy fikambanana mifandray dia mety ho mipetraka ivelan'ny tanindrazanao; amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranokalan'ny NYECOUNTDOWN, tranonkala LLC, manaiky ny hamindrana ireo vaovao ireo amin'izy ireo ianao. NYECOUNTDOWN, LLC dia tsy hanofa na hivarotra na ny fampahalalana manokana sy ny mombamomba manokana ny olona. Ankoatra ny mpiasany, ny mpiantoka sy ny vondron'olona mifandraika aminy, araka ny voalaza etsy ambony, NYECOUNTDOWN, LLC dia manambara fampahafantarana manokana sy fampahafantarana manokana ho valin-kafatra amin'ny zohy iray, didim-pitsarana na fangatahan'ny governemanta hafa, na rehefa NYECOUNTDOWN, LLC dia mino tsara ny finoana fa ilaina ny fampahafantarana miaro ny fananana na ny zon'ny NYECOUNTDOWN, LLC, fety fahatelo na vahoaka amin'ny ankapobeny. Raha mpampiasa voasoratra anarana amin'ny tranokala NYECOUNTDOWN, LLC ianao ary efa nanolotra ny adiresy mailakao, NYECOUNTDOWN, LLC dia mety mandefa mailaka anao handefasa anao momba ny endri-javatra vaovao, mangataha ny hevitrao, na miambina anao fotsiny. miaraka amin'ny NYECOUNTDOWN, LLC ary ny vokatra. Ampiasainay amin'ny bilaogy isan-karazany ny bilaogy vokarintsika isan-karazany mba hampitana ity karazana fampahalalana ity, noho izany dia manantena izahay fa hitahiry kely fotsiny ity karazana mailaka ity. Raha mandefa anay fangatahana ianao (ohatra amin'ny alàlan'ny mailaka fanohanana na amin'ny alàlan'ireo mekanika hevitra momba ny valin-kafatrao), dia manana zo hamoaka izany izahay mba hanampiana anay hanazava na hamaly ny fangatahananao na hanampy anay hanohana ireo mpampiasa hafa. NYECOUNTDOWN, LLC dia mandray ny fepetra rehetra ilaina amin'ny fiarovana mba tsy hiarovana amin'ny fahazoana alàlana, fampiasana, fanovana na fanimbana ny mombamomba ny tena manokana sy fampahafantarana manokana.
Cookies ary aza manara-maso ny fangatahana
Cookies iray dia andiana fampahalalana izay amidin'ny tranokala eo amin'ny solosainan'ny mpitsidika, ary ny mpizaha mpitsidika dia manome ny tranokala isaky ny miverina. NYECOUNTDOWN, LLC dia mampiasa cookies mba hanampiana NYECOUNTDOWN, LLC hamantatra sy hanara-maso ireo mpitsidika, ny fampiasana ny tranonkala NYECOUNTDOWN, LLC, ary ny safidin'ny fidirana amin'ny tranokalany. NYECOUNTDOWN, LLC mpitsidika izay tsy te-hanana mofomamy apetraka ao amin'ny solosain'izy ireo dia tokony hametraka ny mpizaha lalana tsy hanaiky mofomamy alohan'ny hampiasana ny mombamomba ny NYECOUNTDOWN, tranokalan'ny LLC, miaraka amin'ny fahitàna fa ny endri-javatra sasany an'ny NYECOUNTDOWN, ny tranokala LLC dia mety tsy mandeha araka ny tokony ho izy raha tsy misy ny cookies. NYECOUNTDOWN, LLC dia / tsy hanome voninahitra ny fangatahana.
Raha ny NYECOUNTDOWN, LLC, na ny fananany rehetra, dia azo alaina, na raha ny tranga tsy ampoizina dia mivoaka ny orinasa i NYECOUNTDOWN, LLC, dia ny fampahalalana momba ny mpampiasa dia iray amin'ireo fananana nafindra na mahazo ny andaniny. Ekenao fa mety hitranga ny famindrana toy izany, ary ny mpandraharaha NYECOUNTDOWN, LLC dia mety hanohy mampiasa ny mombamomba anao manokana araka ny voalazan'ity politika ity.
Ny doka hita amin'ny tranokalanay rehetra dia mety ho azon'ny mpampiasa mombamomba ny dokambarotra, izay mety mametraka cookies. Ireo cookies ireo dia mamela ny mpizara doka hahafantatra ny solosainao isaky ny mandefa dokambarotra amin'ny Internet izy ireo mba hanangonana vaovao momba anao na amin'ny olona hafa izay mampiasa ny solosainao. Ity fampahalalana ity dia ahafahan'ny tamba-jotra dokambarotra, ankoatra ny zavatra hafa, manolotra dokambarotra voarindra izay heveriny fa tena mahaliana anao indrindra. Ity Politika momba ny fiainana manokana ity dia manarona ny fampiasana mofomamy amin'ny NYECOUNTDOWN, LLC ary tsy mandrakotra ny fampiasana cookies amin'ny alàlan'ny dokambarotra rehetra.
Indraindray, ny NYECOUNTDOWN, LLC dia mety handefa mailaka ho anao ireo gazety elektronika, filazam-baovao, fanadihadiana (sms) fanadihadiana na fampahalalana hafa, na raha tsy izany dia mifandray aminao amin'ny alàlan'ny fizahana mandeha ho azy. Raha tianao ny tsy handray na mifandray amin'ireto fifandraisana rehetra ireto dia afaka misafidy amin'ny alàlan'ny torolàlana omena ao anaty fampahalalam-baovao elektronika sy fampandrenesana, na fandefasana mailaka [mailaka voaaro] manondro ny fanirianao ho esorina amin'ny lisitra na esorina ny angon-drakitra ao amin'ny serivisy NYECOUNTDOWN, LLC. Safidy ny sms (sms), valio fotsiny miaraka amin'ny "MANADIA".
Na dia mety ho zaza tsy ampy taona aza ny ankamaroan'ny fanovana dia mety hanova ny politikany manokana indraindray ny NYECOUNTDOWN, LLC, ary amin'ny fahitsiana azy manokana NYECOUNTDOWN, LLC. NYECOUNTDOWN, LLC dia mandrisika ny mpitsidika hizaha matetika ity pejy ity raha misy ny fanovana ny politikany manokana. Ny fampiasana tsy an'ity tranonkala ity aorian'ny fiovan'ny Politika momba ny fiainana manokana dia manaiky ny fiovanao toy izany.
Mpanambara sy fetra ny fahazoana andraikitra
Fitantanana ny lalàna sy fomban-tany manavaka
Ity lalàna momba ny tsiambaratelo ity dia fehezin'ny lalàna mifehy sy ny fomba fampitaovana toy ny hita ao amin'ny NYECOUNTDOWN, Fepetra fampiasana an'i LLC satria misy ifandraisany sy voarindra araka ny alain'ny lalàna.
Ny adiresy tranokalanay dia: https://nyecountdown.com